काठमाडौं छिर्ने नाकामा प्रहरीको कडाइ, नागढुंगा सुनसान [भिडियो रिपोर्ट]
राजधानी काठमाडौं उपत्यका छिर्ने मुख्य नाका नागढुंगा अहिले सुनसान जस्तै छ ।
कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिँदै गएपछि उपत्यका छिर्न कडाइ गरेपछि नागढुंगा सुनसान भएको हो ।
कडाइ हुनुअघि दैनिक ६०० वटासम्म सवारीसाधन आवतजावत गर्ने नागढुंगा नाकामा अहिले दैनिक ७० वटा मात्रै सवारीसाधन भित्रिने गरेको महानगरीय प्रहरी वृत्त थानकोटाका वृत्तपति प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) घनश्याम श्रेष्ठले बताए ।
डीएसपी श्रेष्ठका अनुसार आइतवार ७८ वटा सवारीसाधन मात्र उपत्यका भित्रिएका छन् । उपत्यका लगायत देशभर कोरोनाको संक्रमण जोखिम उच्च भएको भन्दै गृह मन्त्रालयले सवारीसाधनको पासमा कडाइ गरेपछि उपत्यका भित्रिने सवारीसाधनको संख्या ह्वात्तै घटेको छ ।
खाद्यान्नका सवारीसाधन, बिरामी बोकेका एम्बुलेन्स, भिसा लागेर विदेश उड्नुपर्ने व्यक्ति, स्थानीय तहको स्वीकृति पाएका, रमानापत्र लिएका सरकारी कर्मचारी, उपत्यकाभित्र सरुवा भएको पत्र ल्याएका प्रहरी, सेना, सशस्त्र प्रहरी, मृत्यु संस्कारमा आएका, स्वास्थ्यकर्मी, मेडिकल सामग्री बोकेका सवारीसाधन, स्वाब संकलन गरेर परीक्षणका लागि उपत्यकामा आउने अत्यावश्यकबाहेक अन्य कुनै पनि सवारीसाधनलाई उपत्यकामा प्रवेश रोक लगाइएको छ ।
धादिङको धुनिबेशी नगरपालिकाको समन्वयमा काठमाडौं बसेर धादिङमा काम गर्ने सरकारी कर्मचारीलाई नामावली तयार पारेर दैनिक आवतजावत गर्न दिइएको छ । विना कारण आवतजावत गर्ने कुनै पनि व्यक्तिलाई उपत्यकामा प्रवेश नदिएको डीएसपी श्रेष्ठले बताए ।
‘विना कारण उपत्यमा आउन खोज्ने र जान खोज्ने कसैलाई आवतजावत गर्न दिएका छैनौं । यदि कोही त्यस्ता व्यक्ति आउन खोज्नुहुन्छ भने हामीले नाकाबाट फर्काइदिएका छौं,’ डीएसपी श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भने ।
साउन ३२ गते बिहान ६ बजेदेखि भदौ १ गते बिहान ८ बजेसम्म ३०५ वटा सवारीसाधन उपत्यका भित्रिएका छन् । जसमा एम्बुलेन्स १३०, जीप तथा कार ७८, मोटरसाइकल ७१, सरकारी जीप तथा कार १९ वटा र बस ७ वटा भित्रिएका महानगरीय प्रहरी वृत्त थानकोटको तथ्यांकमा छ ।
जीप कारमा २३५ जना, एम्बुलेन्समा ५३० जना, मोटरसाइकलमा १७१ जना, सरकारी जीपमा ६४ जना र बसमा १०६ जनामा व्यक्ति उपत्यमा भित्रिएका छन् ।
सोही अवधिमा जीप तथा कार १०७ वटा प्रवेश नदिएर फर्काइएको छ, त्यसमा ३७८ जना सवार थिए । ६५ वटा मोटरसाइकलमा १०४ जना र १ बसमा ७ जना गरी १७३ सवारीसाधनमा ४९० जनालाई फिर्ता पठाइएको थानकोटका वृत्तपति श्रेष्ठले बताए ।
प्रहरीले उपत्यकामा छिर्ने सवारीसाधनलाई पहिलो तहमा झ्याप्ले खोला र नागढुंगामा दुवै ठाउँमा चेक गरेर मात्र उपत्यका छिर्न दिएको छ । नागढुंगा नाकामा बस्ने प्रहरीलाई स्वास्थ्यकर्मी बोलाएर कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट कसरी जोगिने भन्ने प्रशिक्षण दिइएको छ ।
दैनिक सयौं व्यक्तिसँग सम्पर्क हुने नाकामा सामाजिक दूरी कायम गरेर परै बसेर चेकजाँच गर्ने व्यवस्था मिलाइएको नागढुंगा प्रहरीले जनाएको छ ।
सरकार ! नख्खुको धूलोले श्वास फेर्नै गाह्रो भो, किन ...
उठ्दैछ धरहरा : २० औं तलाको ढलान सकियो, समयमै काम...
निषेधाज्ञाको पहिलो दिन कस्तो रह्यो काठमाडौं ? [फोट...